सिद्धलेकमा कृषकलाई समस्या पर्दा घरमै गएर सेवा दिने गरेका छौँःकृषि अधिकृत गुरुङ
बिहिबार, असोज ७, २०७८ ०१:३३:५६ युनिकोड
धादिङ,२० भाद्र ।
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत छविलाल गुरुङसँग रामकुमार थापाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. सिद्धलेक गाउँपालिकामा कृषिको अवस्था कस्तो छ ?
सिद्धलेक गाउँपालिका अरु गाउँपालिका भन्दा पृथ्विराजमार्गबाट नजिक रहेको छ । जुन मलेखुबाट ६ किलोमिटर भित्र रहेको छ। काठमाडौ, पोखरा, नारायणघाट बजारको दृष्टिकोणले यो ठाउँ उपयुक्त छ ।भौगोलिक क्षेत्रले यो ठाउँ फलफुल, तरकारी, पशुपालनको लागि राम्रो पकेट क्षेत्रको रुपमा संचालन गर्न सकियो भने राम्रो ठाउँ रहेको छ।
२.सिद्धलेक गाउँपालिकाले कृषिमा के–के काम गर्न सफल भएको छ ?
म सिद्धलेक गाउँपालिकामा २०७५ भदौको अन्तिममा यो ठाउँ आए। मेरो काम भनेको कृषिलाइ महत्वपुर्ण दिनुपर्छ भन्ने थियो। २०७५/०७६ को कार्यक्रममा ट्रयाक्टर, प्लास्टिकमा तरकारी खेति, व्यवसायिक किसानलाइ तालिमहरु दिने, गोष्ठि गर्ने गरेर उहाँहरुलाइ कृषिमा उत्प्रेरणा गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ ।
हामीले धरै कुराहरु उहाँहरुको माग अनुसार सेवा गरिरहेका छौँ। पशु सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि हाम्रा प्राविधिक भाईबहिनीहरुले हरेक ठाउँमा गएर सेवाहरु दिने गरेका छन्। गाउँपालिकाबाट औषधि खरिद गरेर माग अनुसार उहाँहरु आएर औषधिहरु लिन सक्नुहुन्छ।गाउँपालिकाबाट अन्य सेवाहरुमा माटो परिक्षणका कुरा,तालिमहरु, गोष्ठिहरु गरेर किसानहरुलाइ सेवा दिँदै आइरहेका छौँ।
३. कृषि प्राविधिकहरुको दरबन्दीले कृषकहरुलाइ कत्तिको सजिलो बनाएको छ ?
हाम्रो कृषिमा एक जना अधिकृत र ३ जना प्राविधिकहरु २०७६ सालमा करार हायर गरेका छौँ । वडा नं १, २, ३ मा एक जना प्राविधिक वडामा पठाइसकेका छौँ। र वडा नं ४ ,५, ६ ,७ लाई पनि एक जना पठाइसकेका छौँ। २ जना कार्यालयमा बसेर कार्यालयबाट सबै वडाका किसानहरुलाइ परेका समस्याहरु निग्रानि राखेर उहाँहरुलाइ भन्छौँ।
विज्ञको रुपमा जान प¥यो भने म आफै जान्छु। जस्तो धानमा रोग लागेको छ भने स्थलगत अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्छौँ। फौजि किरा धेरै जसो मकैमा लाग्ने गत वर्षमा मात्र हामीले ३२०० जति फौजि, सलह किराको लागि बिषादिहरु खरिद गरेर प्रतयेक किसानहरुलाइ २/३ पाकेटको दरले उहाँको क्षेत्रफलको आधारमा जैविक बिषादि दिइसकेका छौँ । धेरै समाधान भएको छ भन्ने कुरा किसानबाट राम्रो सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ ।
४.फौजि किरा नियन्त्रण गर्नको लागि औषधिहरु दिइरहेका छौँ,यो किसानलाई निशुल्क हो ? कृषिमा समस्या प¥यो भने अन्य औषधिहरु गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ ? के छ अवस्था ?
हामीले सबै किसानहरुलाई निशुल्क वितरण गरेका छौँ। किसानहरुले समस्या परेको कुराहरु गाउँपालिकामा स्थानिय निकायमा कृषिको, पशुको सेवाहरु पाइन्छ भनेर धेरै जसो फोन सम्पर्क मार्फत अथवा गाउँपालिका आएको बेलामा बसेर उहाँहरुले कार्यक्रमहरु बुझ्नु हुन्छ । समस्याका बारेमा बताउनुहुन्छ हामीले स्थलगत निरीक्षण गरेर अथवा पालिकाबाट समाधान हुनसक्ने छ भने परामर्श दिएर पठाउँछौँ ।
५. कृषकहरुलाई हाते ट्रयाक्टरहरु वितरण गर्नुभएको छ,यसको प्रभावकारीता कत्तिको देख्नु भएको छ?
विगतमा २०७४/०७५ सालमा ४० वटा हाते ट्रयाक्टर वितरण गर्नुभएको रहेछ । त्यो ट्रयाक्टरले राम्रो ग¥यो भन्ने कुरा थियो। २०७५/०७६ मा १०७ वटा ट्रयाक्टर पेट्रोल र डिजेल दुई किसिमको हुन्छ।
हामीले ब्राण्ड र कम्पनि हामीले तोक्न नपाउने हुनाले खरिद गर्दा टेन्डर हालेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।टेन्डर हालेर गर्दा पहिलो लटमा ४६ वटा वितरण ग¥यौँ। पछिको लटमा किसानको माग पनि बढि र पैसा बाँकी रहेको हुनाले ६१ वटा अर्को कम्पनीबाट खरिद ग¥यौँ ।किसानहरुलाइ पेट्रोल वाला उपयुक्त हुने पेट्रोल वाला हल्का हुने भएकोले माथिल्लो भेगमा ठिक भयो तर तल्लो टारहरुमा प्रभावकारी देखिएन। हामीले १०७ वटा ट्याक्टर वितरण ग¥यौँ।
२०७६/०७७ मा हामीले टेन्डर गर्न सकेनौँ। किसानहरुलाई गाउँपालिकाबाट लेराएर वितरण गर्यौँ। धेरै महङगो भयो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो बेलामा ११८ वटा ट्याक्टर वितरण गरेका थियौँ। हामीले अघिल्लो आ.व मा वितरण गर्न सकेनौँ । हाते ट्याक्टरले किसानहरुमा नकारात्मक असर छैन । यो वर्ष हामीले अघिल्लो वर्ष सहित २४० वटा हाते ट्रयाक्टर वितरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।
६.सिद्धलेक गाउँपालिका किसानहरुले अनुदानमा ट्रयाक्टर लिनको लागि प्रावधान के के छ ? उहाँहरुले कसरी पाउनुहुन्छ ?
हामीले आफै खरिद गर्दा धेरै गुनासोहरु आउने गरेको हुनाले यो वर्ष किसान आफैले खरिद गरेर ल्याउने र गाउँकार्यापालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर ट्याक्टर दिने भन्ने कुरा छ । तर काम सुरु भएको छैन विस्तारै भाद्र महिनाको अन्तिम सम्म गर्न सक्छौँ । किसानहरुले सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्दा राम्रो हुन्छ।
७. वितरण गरीसकेको ट्रयाक्टरहरुको अवस्था के छ ? प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन? मर्मतको लागि स्वएम कृषकले गर्नुपर्छ कि ? कसरी व्यवस्थापन गरीरहेका छौँ ?
गत वर्ष हामीले जति खरिद गरेर लयाएका थियौँ त्यो प्राविधिक खर्च गरेर आपुर्ति कर्ताबाट एक वर्ष वारेन्टी हुने हुनाले सम्बन्धित किसानहरुले जहाँ विग्रेको छ सम्बन्धित आपुर्ति कर्तालाई भनेर सामान हेरेर कस्तो अवस्था छ भनेर आपुर्ति कर्ताले नै खर्च व्यहोरेर मर्मत गर्ने गरेको छ ।
८.गाउँपालिकाले कृषकहरुलाई बिउ बिजन बाड्ने,सहजीकरण गर्ने काम के गरीरहेको छ ?
गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बिउ विजन बाड्ने भनेर कार्यक्रम राखेको छैन। संस्थाले एउटा पकेट क्षेत्र बनाएको छ । त्यो पकेट क्षेत्र अनुसार हामीले काउली, बन्दा, गोलभेडा, लसुन, प्याज खरिद गरेर दिएका थियौँ।
गत वर्ष ३ हेक्टरमा प्याज खेती गर्ने र २ हेक्टरमा लसुन खेती गर्ने भनेर कार्यक्रम राखेका थियौँ। सिद्धलेक १ को बाजो गरामा, छापगाउँमा र नयाँ बस्तीमा यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो वर्ष हामीले लसुनको बिउ बिक्रि गर्नको लागि सहयोग गर्दिनुपर्यो भनेर भन्नुभएको छ। आउने वर्षमा प्याज र लसुनको लागि भनेर ५/५ हेक्टर राखेका छौँ । हामी काम चाडै गर्ने तयारीमा छौँ।
९.सिद्धलेक गाउँपालिकामा कस्तो कस्तो कृषि वस्तुहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ ? पकेटक्षेत्रको हिसावले कुन कुन क्षेत्र राम्रो छ?
सिद्धलेक गाउँपालिकामा लामो समय गर्न सक्ने भनेको गोलभेडा सबै भन्दा बढी खेती हुने गोलभेडाको माग बढि हुने भएकाले सिद्धलेक १ देखि ७ नं वडासम्म भन्नुपर्दा वडा १ नं को भन्दा वडा २ नं का किसानहरुले धेरै राम्रो गरेका छन् । पात्लेमा सुन्तला र गोलभेडा खेती छन् । वडा ३ नं मा खुल्ला चउरमा गोलभेडा खेती गरेका छन् ।
वडा नम्बरमा ४ मा सानाकिसान मार्फत र आफनै प्रयासमा बढिमा लहरे बाली खेती गर्नु भएको छ। यसको बजार काठमाडौ, पोखरा नारायणघाटमा राम्रो बजार रहेको छ। सिद्धलेक गाउँपालिकामा किसानहरुले जसले उत्पादन ग¥यो प्रोत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ।
खाद्यन्न बालीमा धान र मकै बाली हुन्छ। फलफुलमा केरा खेतिलाइ प्रोत्साहित गरेका छौँ।आगामी वर्षहरुमा पकेट क्षेत्रको हिसावले गरेर आदमटार, पिपलटार, माझीटार र बुङचुङ क्षेत्रमा तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषण गर्न सक्यौँ भने यो ठाउँमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
१०. कोही कृषकहरु कृषि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले कृषि पेशामा लाग्नु अगाडि के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
कृषिमा हेर्दा भौगोलिक क्षेत्र, माटो, हावापानी, बिउ किसानको जोस जागर, उहाँको कत्तिको काम गर्ने क्षमता छ यसमा भर पर्ने कुरा हो। हामीले उहाँलाइ तालिम, भ्रमण गोष्ठि गरेर पहिले नै चेतना, सिप, ज्ञान दिएर गर्न सक्यो भने प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
११. सिद्धलेक गाउँपालिकामा पशुपालनको अवस्था सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? पशुपालनलाई अगाडि बढाउनको लागि कस्ता निति तथा कार्यक्रम ल्याउन पर्छ होला ?
नेपाल सरकारले पनि दुध र मासुलाइ भनेर बढि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । सिद्धलेक गाउँपालिकामा बढि दुध उत्पादन गर्ने ठाउँ हो । मासु उत्पादनको लागि पनि धेरै राम्रो छ । किनभने यो ठाउँमा बाख्रा पालन गरेर बोका, खसी वर्ष वर्षमा प्रयास नेपालले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । यो वर्ष हामीले सानाकिसानलाई मात्र ३६ वटा भैसी खरिद गर्नको लागि १८ लाख रुपैया अनुदानमा दिएका छौँ ।
यो संघ मार्फतको हो । प्रदेश मार्फतको १२ लाख ५० हजार थियो । यसमाबाट २० वटा भैँसी खरिद गर्नुभएको छ । एउटा भैँसीको एक लाख मुल्यलाई आधार मानेर कार्यक्रम गरेका छौँ । वडा नं ६ मा एक हजार वटा बाख्रा पाल्नु पर्ने यो वर्ष ३०० वटा मात्र खरिद गर्नु भएको छ। उहाँहरुलाइ हामीले १२ लाख अनुदान दिएका छौँ।
१२. सिद्धलेकमा साना सिंचाईको लागि कस्तो कार्यक्रम छ ?
साना सिंचाइमा वडाहरुले आफै कार्यक्रम राख्नुहुन्छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष प्रत्येक वडामा ३÷३ वटा भनेर २१ वटा राखेका थियौँ । साना सिंचाईको लागि भनेर कुलो मर्मतको लागि १ लाख ५० हजारको एउटा योजनाका लागि छुट्टाएर काम गरेका थियौँ ।
१३. समग्र कृषिको चुनौतिहरु कस्तो देख्नुभएको छ ?
किसानहरुले जति पनि गर्नखोज्नुहुन्छ,कहिले काहीँ कामदारको समस्या, बजारको समस्या, रोग, किराको समस्या हुन्छ ।उहाँहरुले समयमा समस्या जानकारी नगराउँदा मर्कामा परेको छ ।तरकारी उत्पादन हन्छ तर भनेको समयमा मुल्य नपाउँदा समस्या परेको छ । तालिम दिएर फलफुल खेति तरकारी खेति गराउन पर्छ भन्दा कोभिड १९ को कारणले २ वर्ष हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ । यसलाइ ठुलो चुनौतिका रुपमा लिएका छौँ।
१४.कृषि क्षेत्र स्थानिय तहको प्राथमिकतामा कत्तिको परेको छ ?
बुङचङ क्षेत्रमा हामीले अघिल्लो तरकारी संकलन केन्द्र बनाएका छौँ । यो वर्ष २ वटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणको बजेटबाट ७ नम्बरको आदमटारमा र पिपलटारमा २ वटा तरकारी संकलन केन्द्र बनाएका छौँ । त्यहाँ मार्फत सरकारी संकलन गरेर काठमाडौ र पोखरामा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ ।
१५.यतिबेला सिद्धलेक गाउँपालिकाका कृषक दाजुभाई दिदीबहिनिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा र पशु सेवा शाखा मार्फत जति पनि गर्नुपर्ने कामहरु धेरै गरेका छौँ । उहाँहरुले योजना माग गर्नुभयो भने प्रपोजल पेश गर्नु भयो भने हामीले त्यसको आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यक्रम संचालन गर्न सक्छौँ । किसानहरुले खाद्यन्न बाली अथवा पशु पालनमा कुनै पनि समस्या आयो भने गाउँपालिकाको कुषि विकास शाखामा सम्पर्क गरेर समस्या समाधान गर्नसक्नुहुन्छ ।
यो वर्ष हामीले मकैको, भेडाको कार्यक्रमहरु राखेका छौँ । आउने वर्षमा हामीले लसुन, प्याज, फलफुल, तरकारी र आकस्मिक बालीका कार्यक्रमहरु राखेका छौँ । गाउँपालिकामा आएर कृषि विकास शाखामा सम्र्पक राख्नु भयो भने समाधान हुन्छ। धन्यबाद !